RAHARAHA JENERALY RICHARD RAVALOMANANA: « Tsy ara-dalàna ny fanamelohana sahady ireo olona voasambotra », hoy ny Mpisolovava – Madatopinfo
Nitondra fanazavana tamin’ny alalan’ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety teny Ankadifotsy ny alakamisy 8 Jolay i Maitre Willy Ranzafinjatovo (Maitre Olala) sy Maitre Maka izay manana olona arovana amin’ny raharaha fisamborana olona momba ny fikasana hamono ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarmaria, Jeneraly Richard Ravalomanana. Manoloana ny fampiantsoana mpanao gazety nataon’ny teo anivon’ny zadarmaria andro vitsy lasa izay dia nanambara ireto mpisolovava ireto fa tsy azo ekena ny fanamelohana azy ireo aloha raha tsy mbola eo am-pelatanan’ny Fitsarana ny mombamomba ny raharaha rehetra. « Tokony mbola hijanona tsiambaratelo hatreto ny fanadihadiana rehetra fa izany fihetsika atao izany dia isan’ny tsindry bokotra atao amin’ny mpitsara hikirakira ny raharaha », hoy i Maitre Olala. Ankoatra izay dia nilaza ireto Mpisolovava ireto fa tsy misy ny porofo hanamelohana ireo olona voasambotra ireo. « Mpivarotra fiara no fiveloman’ireo nosamborina ireo, raha misy olona hividy na hanakalo dia miantso azy ireo hitondra ny fiara hojerena. Tamin’io andron’ny alarobia 23 Jona io dia narary tao an-tranony ny iray tamin’izy ireo. Naharay antso ny iray tamin’izy mpiara-miasa nilaza fa atakalo Kya ilay fiara 207, avy hatrany dia niala teo Analakely hihazo an’Androndrakely ilay namany nitondra ny taratasy rehetra momba ilay fiara atakalo. Nandeha moto kosa ny iray ary niala teo amin’ny tobin-tsolika Jovena avy eo nandeha fiara niaraka ny telo lahy. Avy tany Andoharanofotsy dia niverina teo Androndrakely ka teo no nisamborana azy ireo », hoy i Maitre Maka. Voalaza ihany koa fa voatahiry ao anatin’ny finday ny laharan-tariby niantso azy ireo mikasika ilay fifanakalozana fiara ». Nanampy fanazavana koa i Maitre Olala fa ekena fa nitondra basy efa voafahana ny iray tamin’izy ireo, satria manana fahazoan-dalana ara-dalana hitondra izany izy. « Amin’ny maha mpandraharaha fiara azy ireo dia mikirakira volabe matetika izy ireo ary rariny raha hitondra basy izy entina hiarovana », hoy hatrany ny Mpisolovava. Tamin’io fotoana nisamborana azy ireo io anefa dia voalaza fa nisy vola mitentina 4.200.000 ariary tany amin’ireto olona ireto, araka ny nambaran’ny zandarmaria anefa dia 2.000.000 ariary ihany no tao. Miantso ny mpikirakira ny lalàna rehetra isan-tokony araka izany i Maitre Olala sy Maitre Maka mba hiverina ao anatin’ny ara-dalàna. Andrasana ny tohin’ity raharaha fisamborana olona ity ary antenaina fa handala ny fahamarinana ireo tompon’andraikitra mandray an-tanana izany.